Digital Twin - BIM + GIS - shuruudihii ka soo baxay shirkii Esri - Barcelona 2019 - Geofumadas
Digital Twin - BIM + GIS - ereyo ka ciyaaray shirkii Esri - Barcelona 2019
Mee, 2019 ArcGIS-ESRI, tabo cusub
Egeomates ayaa daboolaya foomamka fog iyo wejiga dhacdooyin dhowr ah oo la xiriira mawduuca; Waxaan la xiro this 2019 wareegga biloodle ah, iyadoo ka qeybgalka Shirka User ESRI ee Barcelona - Spain 25 April in lagu qabtay Machadka cilmi dhul iyo Cartography ee Catalonia (ICGC).
Isticmaalka hashtag #CEsriBCN, in our xisaabta twitter Waxaan bixinay caymis nololeed oo ku saabsan dhacdadan, marka laga reebo wakiillada Esri Spain, waxaan awoodnay inaan aragno cilmi-baarayaasha, jimicsiyeyaasha hay'adaha iyo shirkadaha hadda isticmaala software ee calaamadahan. Nasiib darro, marka la barbardhigo dhacdooyinka kale ee aan horey ugaqeybqaatay, munaasabaddu waxay ahayd arrin aan caadi aheyn oo urur ah, mudnaanta koowaad iyo bandhigayaasha. Guud ahaan, ajandaha waxaa loo qaybiyey miisaska wareega wareega ah ee 2, fadhiyada guud iyo bandhigyada diiradda saaraya wargeysyada shirkadda ArcGIS, isbahaysiga SAP, AutoDesk iyo Microsoft.
Hoos waxaan ku soo koobaynaa dhinacyada soo jiitay dareenka ugu muhiimsan habka Geo-injineernimada.
Mustaqbalka waan wada soconaa ...
Bilowga waxay ahayd mid xiiso leh, miiska wareega oo mawduucyo ah sida isdhexgalka ee BIM iyo Aqoonta Farsamada (AI) ee loo adeegsaday GIS ayaa la taabtay. Tani waxaa hogaaminayey Martí Domènech Montagut ee Agaasimaha Adeegyada Teknoolajiyada iyo Nidaamyada Systems, Ilse Verly oo matalaya Autodesk iyo Xavier Perarnau SeysTic. More xiiso leh sababta oo ah muhiimadda ay arrintan, taas oo u guurayaan saarayaasha of software iyo hardware for Geo-injineernimada. Eeg mawduuca BIM shirarka sida, taas oo guud ahaan la beegsaday duurka ku geospatial, labada BIM sida sirdoonka macmal oo mataano digital, waxaa ku caawinaysa in odoroso mustaqbalka ah, taas oo xal dhisi doono baako oo dhammeystira in socodka ah meesha user isticmaali doonaa sida ugu fiican ee qalabka, xor iyo laalista laakiinse waxaad ku hoos ah silsilad saarka garabka hab dhul-dhafan. Sida calaamad oo booska uu ka ESRI, in ay sii wadaan iskaashiga dhismaha oo u oggolaan dhexgalka tiknolojiyada badan, xaaladda ah in aanu ka maqnaan 2019 BIMSummit kuwaas oo kaliya halkan ka dhacay Barcelona, ​​halkaas oo shirkadaha yar hadlay oo ku saabsan waxa ay qabanayaan in ay is illowsiin ah dhaqdhaqaaqa da'ayeen gudahood wareegga nolosha ee dhismaha - hawlgalka (AECO).
Dhiirrigelinta mustaqbalka ee 4ª Warshadaha Warshadaha, Muhiimadda Jaalliyada GeoSpatial.
Ka dib soo dhaweyn ah by Jaume Masso, Agaasimaha Cartogràfic Institut ee i Geològic de Catalunya (ICGC), waxay bilaabeen qabashada xiiso Angeles Villaecusa - Agaasimaha Guud ee ESRI Spain, kuwaas oo kala jejebiyey barafka la video ah kaftan ah in muujinaysaa Jaahil ah wixii runtii waa, isticmaalka iyo codsiga GIS. Out of jocular ah, video ku caddeeyo in Nidaamka Xogta Geographic ah waa ka sii badan intii qalab loo isticmaalo si adag, waayo, khariidaynta.
Wargeyska ayaa xaq Esri GeoSpatial Cloud: Waxyoon mustaqbalka ee 4ª Industrial Revolution, loogu talagalay in ay soo bandhigi muhiimadda ay leedahay GeoSpatial Cloud on himilooyinka hufnaan, waxtarka iyo is dhexgalka oo dhaqdhaqaaqa warshadaha ee guud ahaan laakiin for our macnaha waa da'ada ah Fikradaha SmartCities.
Villaescusa, waxay muujisay ka qaybgalayaasha in ay jiraan macaamiisha ESRI-da iyo adeegyadda meelaha aan dadku aqoon, sida Shirkadda Walt Disney Company, oo isticmaala GIS si ay u samayso magaalooyinka filimadooda, taas oo ka dhigaysa in ay si toos ah u isticmaalaan xogta juqraafi.
Haddii qof ayaa ku taabtay si ay u arkaan filim kartoon ah, waxaan kuu sheegi karaa in aan ma ka soo ESRI ogahay in credits dhamaadka filimka Incredibles The ah, iyo ma ay ogayn in version ugu dambeeyay ee Blades orodyahanka ESRI ayaa ka qayb-galay, hadalhaynta sawirada.
Xaqiiqdu waxay tahay in maalin kasta shirkado badani ay u baahan yihiin in la isticmaalo xogta juquraafiyadeed ee mashaariicdooda, loogu talagalay dhismaha dhismaha, qiimeeynta duruufaha, iyo kaddib xakamaynta hawlgalka. Sababtani waa sababta ay u dhowdahay dadaallada wax ku oolka ah ee loo istcimaalay isticmaalka macluumaadka sida SAP ama HANA, oo hadda indhaheeda u jeedinayaan, ma aha wax la yaab leh.
News Key ArcGIS Key Key
Aitor Calero, oo mas'uul ka ah Teknoolajiyadda iyo Dib-u-habeynta Esri - Spain, ayaa soo bandhigay waxa soo socda mustaqbalka dhaw ee platformka ArcGIS. In uu soo bandhigay uu sharaxay sida qalab cusub oo ka kooban qoyska ESRI waxay bixin kartaa qiime-ku-kordhin wakiil ah ee lagu xoojinayo SmartCities iyo Digital Twins (Laba mataano ah).
Waxaa bilaabay la socda ArcGIS Hub, tusaale u ah qorshaynta iyo maaraynta dalka Urban 3D la madal ee ArcGIS, taas oo ay taageertaa ilaa xad la ansaxiyo mataano digital. Oo weliba wuxuu kaloo muujiyeen qalab cadastre gudaha la ArcGIS Gudaha dhismaha ah - la qalab this waa suurto gal in ay isticmaalaan maps 2D iyo 3D, qurxino iyo qaabkaaga saxda ah ee maaraynta hantida.
Intaa waxaa dheer, wuxuu ku tilmaamay shaqeynta codsiyada sida Tracker ee ArcGIS. Qalabkan ugu dambeeya ee kormeerka shaqaalaha ee fulinaya sahanada berrinka, awood u leh inay la wadaagaan goobtooda, waxay yeelan karaan aragtida weyn ee caymiska qofka u fulinaya aagga loo baahan yahay. Waxay ka shaqeysaa qalabyada Android iyo kuwa iOS, oo leh muuqaalada muuqaalka fudud ee loogu talagalay isticmaalaha, waxaana loo qaabeyn karaa isticmaalka offline. Codsigaan waxaa sidoo kale ku jira awoodaha dabagalka iyo adeegga lagu kaydinayo lana maamulo wadooyinka meelaha; oo ka faa'iideysanaya BigData meel ku meel gaar ah.
Calero, wuxuu si cad u qeexay waxa ESRI ay tahay inay bixiso sannadkan iyo kuwa soo socda; qayb ka mid ah Geofumadas waxaan sugeynaa, inaan tijaabino oo soo bandhigno kartidooda.
Isticmaalida adeegyo badan oo ku saabsan sidii loo heli lahaa xogta tayada muwaadinimada - Case Aparcabicibcn
Bandhigan, oo aad u xiiso leh, mas'uul ka ah Camila González, Maamulaha Mashruuca ee Bariga Xogta ah, wuxuu muujiyey sida nidaamyada xogta looga caawiyo ururinta xogta ku saabsan dhismayaasha ama kaabayaasha leh saameyn bulsheed oo sarreeya. Xaaladdan oo kale ayaan ka hadalnay meelaha baabuurta la dhigto ee baaskiilka, oo sida, kiiska Barcelona, ​​waxay u taagan tahay habab muhiim ah oo gaadiid ah, oo ay ku jiraan adeegyada deynta baaskiilka.
Gonzáles ayaa sharraxay, sida loo adeegsanayo shuruudaha, tirada badan ee macluumaadka tayada leh ee magaalooyinka laga heli karo si karti leh. Taasna waxay u dhigantaa abuuritaanka mashiin u furan user, kuwaas oo samayn kara xaqiijintooda ka hor adeegsiga adeegga.
Waayo, dhawaaqa wax niyadsan ah, crowdsourcing u baahan tahay ka qaybgalka user weyn iyo kormeerka by Gobolka, si loo helo xogta furan, iyo dhismaha user codsiyada saaxiibtinimo iyo maamulka. Mashruuca ayaa rajeynaya inuu gaaro dhamaadka muujiyay, madal ama nidaamka muujinaysa la dhigto baaskiil helitaanka / aragti, haddii ay u isticmaalaan badbaado lahayn ama haddii aad gobolka waxaa ka hawlgala; labadaba go'aan qaadashada ku saabsan nidaamka gaadiidka gaadiidka, iyo xalka ugu dambeeya ee isticmaalaha.
Markaan go'aansanno, soo bandhigidda kiisaska jawaab-celinta dabka, ArcGIS Enterprise ee Bombers de Barcelona, ​​waxay ku xiran tahay GIS-da si toos ah, oo uu hogaaminayo Miquel Guilanyà. Tiknikada GIS. Qarax SPEIS- ee Barcelona, ​​kuwaas oo sharaxay si faahfaahsan sida abuurista nadaamka macluumaad / boosteejo ah ee waqtiga dhabta ah, jawaab ka hortagga iyo deg-deg ah si ay u dhacdo ama xaalado gurracan ee suurogalka ah.
Guud ahaan, dhacdada ayaa ka soo baxda filashooyinka, u socota ilaa ay ku muujiso macluumaadka ku haboon, ee danaha kuwa kaqeybgalaya; iyo sidoo kale horumarinta isbahaysiga lagu gaarey sannadihii la soo dhaafay shirkadaha kale, iyo soo bandhigidda sheekooyinka guusha iyo casriyeynta codsiyada ESRI. Munaasabaddaas oo ka dhacday Barcelona, ​​ma ahan wax la yaab leh in waraaqo dhowr ah ay ku qoran yihiin Catalan; iyada oo xaddidaadaha ay taasi keeni karto dadka isticmaala kuwaas oo aan ku hadlin.
Post Previous«Previous Adeegga shabakada khariidadaha hore ee ka mid ah kuwa ugu caansan ee Mapping Volume 28-124
Post Next Ku beddel xogta CAD-GIS oo leh GGG ArcGIS ProNext »